Naanị Chukwu ga-ama m ikpe? — njem Lee - Official Site
ikpeazụ ná ngwụcha izu, mụ na nwunye m gara a alụmdi na nwunye omumuihe na anyị na chọọchị. Dị ka anyị na-aga bụla nook na cranny nke anyị alụmdi na nwunye, anyị na-atụle ihe ezi, ihe ọjọọ, na jọrọ njọ. Anyị nwere ọtụtụ ohere iji gbaa onye ọ bụla ọzọ, ma anyị nwekwara Ohere tụọ adịghị emezi emezi. N'oge anyị kwurịtara, nwunye m nyeere m aka ịhụ ebe m na-ada ada obere, ebe m na-anọghị na-dị ka na-ahụ n'anya dị ka m kwesịrị. E ọ bụ mebie iwu Jizọs bụghị ikpe m ikpe? Echeghị m otú.
Jesus a apụtaghị na ọ bụ ihe ọjọọ ọ bụla ọ na ihe ziri ezi. Dị nnọọ a amaokwu ole na ole mgbe e mesịrị, Jesus na-agwa ndị gere ya ntị ime ka ikpe banyere onye ha kerịta eziokwu na. Na n'amaokwu 15 nke otu isi, Jesus akụziri ha ka ha na-ekpe ikpe ndị na-azọrọ na-amuma, ịhụ ọ bụrụ na ha nwere ezi okwu site na Chineke ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ha na-anụ ọhịa wolf na atụrụ si uwe. Ọ bụghị banyere ọtụtụ ndị ọzọ n'Akwụkwọ Nsọ na nyere anyị iwu ka mgbanwe ụdị ihe ziri ezi. Jesus apụtaghị ikwu nile ikpe na-ezighị ezi. Ma ọ bụrụ na anyị na-agwa onwe ya eziokwu, anyị adịghị pụtara na ma na.
Ọtụtụ ndị na-esi ọnwụ na ị ga-mgbe na-ekpe ikpe onye ọ bụla, ma ha ekweghị n'ezie na. Ha na-echeghị na ọ bụ ihe ọjọọ na-akpọ ndị cops na ere ọgwụ ọjọọ na-ere dope n'ihu ụlọ ha. Ha na-echeghị na ọ bụ ihe ọjọọ na-agbanyeghị TV mgbe na anyaukwu na-ekwusa na-amalite na-arịọ maka ego ha. Mgbe ahụ, e asusu. Mgbe ị na-akpọ onye maka ikpe ikpe, ị na-n'ezie na-eme ka a omume ikpe banyere onye ahụ. Na nke ọ bụla n'ime okwu ikpe ndị, ikpe a na banyere omume nke ndị ọzọ.
ma, mgbe ikpe akụrisị n'ebe ọ bụla ná mba ha, ọ bụ na-akpaghị aka na-ezighị ezi. Ònye ka anyị ga-eme ka ikpe banyere ndị ọzọ? Ka anyị chee echiche banyere ihe Jizọs bu n'uche mgbe ọ gwara anyị ka anyị ikpe.
Ihe ọ na-Pụtara
Anyị na-eji okwu-ikpe a otutu dị iche iche na ụzọ. Anyị nwere ike na-ekwu okwu banyere ikpe ikpe a talent show ma ọ bụ na-ekpe ikpe ikpe. Ọ pụrụ ịpụta a otutu dị iche iche ihe. N'otu aka ahụ, okwu Grik Jesus eji maka "ikpe" ọ bụghị mgbe nile pụtara otu ihe. Ya mere, anyị na-ele anya na ndị ọzọ akụkụ ihe odide a na ndị ọzọ nke Bible ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịghọta ihe okwu ya pụtara.
Ka ị na-agụ akụkụ Akwụkwọ, ọ na-aghọ doro anya na Jizọs na-awakpo a kpọmkwem ụdị ikpe. Ọ na-eji a hilarious image nke nwoke na-ahụ a speck nke sawdust na mmadụ anya, ma eleghara eziokwu ahụ bụ na o nwere a gigantic log nke aka ya,. Nke ahụ bụ ka a gbara ọtọ nwoke akatọ oghere dị gị jeans. Jesus na-adịghị njọ ikpe ụdị ọ bụla nke ikpe; Ọ na-ama anyị ikpe ezi omume n'anya onwe, ihu abụọ ikpe.
n'amaokwu 5 ọ na-ekwu, "Ị mbubịk, -akpa na-abanye anyị nke gị onwe gị anya. "Tupu anyi na-agbali ikpe ndị ọzọ ikpe, anyị ga-ekpe ikpe onwe anyị. Ihu abụọ jide ndị mmadụ ụkpụrụ na ha onwe ha na-eleghara. Na mgbe onwe onye na-ezi omume na ndị nwere a pụrụ iche onyinye maka naegosi gị flaws, ha na-eleghara ọdịdị ha onwe ha. Jizọs na-ekwu na nke ahụ bụ a nsogbu. Ọ na-agwa anyị na Chineke ga-ekpe anyị na-erite.
O bu nzuzu na-eji olu ike ikpe ndị ọzọ na ma kwụrụ n'elu ha ka ya bụrụ na onye zuru okè. Chineke bụ nanị ikpe na ọcha aka. Ndị fọdụrụ n'ime anyị na-ruru unyi ndị mmadụ, -atụ bụla ọzọ na-asa ahụ.
Ị hụrụ na ọ dịghị mgbe ekwu, "Were log si, na echegbula banyere ndị ọzọ n'anya. "Ọ na-ekwu n'ezie, "Nke mbụ na-log nke gị onwe gị anya, na mgbe ahụ ị ga-ahụ nke ọma na-speck ụmụnna gị anya. "Ọ na-agwa anyị aka inyocha onwe anyị, na mgbe ahụ na-enyere ndị nne si.
Ọ bụ ịhụnanya na-adịghị ka m na-achọpụta ihe na-emerụ ná ndụ gị, ma ileghara ya anya dị ka ọ dịghị ebe ahụ. Gịnị mere m ga-ekwe ka onye m hụrụ n'anya ịnọgide na-ebi ndụ a-ebibi n'ụzọ? Ọ bụrụ na m hụrụ gị n'anya, M agwa gị ihe bụ eziokwu ọbụna mgbe ọ na-ewute. Ma, ọ ga-dabere na ụkpụrụ Chineke banyere, Mụ onwe. Na m ga-eme ya site na a umeala n'obi postcho na-amata m mkpa otu amara ị na-eme.
Biko erube isi Matthew 7:1. Ma echefukwala banyere Galeshia 6:1: "Brothers, ọ bụrụ na mmadụ a na-ejide na a mmehie, unu ndị mmụọ kwesịrị weghachi ya jiri nwayọọ. "Anyị kwesịrị onye ọ bụla ọzọ.
MrAveryBrown • November 12, 2013 na 12:46 pm • zaghachi
na-agba ume. ikpe. echiche. Ka anyị chọpụta obi, -agbalịsi ike ịmụta na nke a echiche, kwa na-etinye ya n'ọrụ.
Steve • November 13, 2013 na 4:31 pm • zaghachi
okwu ọma, njem. nnọọ irè, -enye aka ngwa n'ihi na ndị na-emeso a ụdị ọnọdụ. Grace na udo…
Esteban ramirez • November 12, 2013 na 12:57 pm • zaghachi
Nke a bụ ihe kasị ezi definition nke amaokwu. Daalụ nwanne m na-agbaso mgba a. Ekele nwanne m nwoke na-eme ihe ị na-eme!
Gị Nwanna ke Christ!
Charles • November 12, 2013 na 1:07 pm • zaghachi
Dị ka m pastọ gaa n'elu nke a otu izu gara aga ka dị ọhụrụ na uche m. Pastor Brian kwuru “-ikpe abụghị kwesịrị ekwesị okwu ma ọ bụrụ na ị na-agụ Grik ma na-agụ ya na onodu.” Ọ gara n'ihu ịsị a mma translation gaara “adịghị ikpe dị ka a Onyeikpe” ma ọ bụ ime ihe dị ka ikpe (Old style testement). -Eme ka a ikpe na-agafe a ikpe na- 2 dị iche iche ihe.
The nzukọ Rivera • November 12, 2013 na 1:10 pm • zaghachi
Aint nothin ma eziokwu :) Amen nwanne.
Jared • November 12, 2013 na 1:25 pm • zaghachi
Nke a bụ n'ezie bara uru ná ndụ m ugbu a. M na-adịbeghị anya e nwere mkparịta ụka anyị na m nne nne m na-abụghị onye kwere ekwe, na m na-agbalị ka o gosi ya ịhụnanya Chineke na. M ga-ekwupụtara mmehie m ya ma rịọ maka ya gbaghara, na ọ ga-agbaghara ma ọ ga rant banyere otú ihe ọjọọ m na ihe ụfọdụ. Ana m enwe ekele na-ezighị ezi n'ihi nkwenye m na-ama na-eche na Chineke, ma ọ ewute m ntakịrị n'ihi na ọ dịghị ahụ ya mmehie. Ọ dị nnọọ etịbede m ala. M ọchị ma na-ahụ ya n'anya. M na-aghọta na m nwere mbipụta na-ahụ n'anya na ezinụlọ m, ma ọ ewute m n'ime ntakịrị mgbe ọ na-adịghị ekweta ya mmehie na bụ ya mere ngwa ikweta nke m. Nke a bụ ụfọdụ enyemaka ezie na. ekele
Ezra_of_Israel • November 12, 2013 na 1:31 pm • zaghachi
Nnọọ ezi ụzọ nke n'itinye ya na analysis nke Akwụkwọ Nsọ. Chukwu gozie gị. Kedu ihe bụ ịhụnanya? M na a na okodu ogologo oge n'elu na Ịlaịja ajụjụ ...... woah
PastorBenJohnson • November 12, 2013 na 1:34 pm • zaghachi
Right on! -Aga na nke a, Pọl na-ekwu na 1 Ndị Kọrịnt 5:12: “Gịnị ahịa bụ na ọ m na-ekpe ikpe ndị nọ n'èzí chọọchị? Ọ bụghị gị na-ekpe ikpe ndị dị n'ime.”
Ọ bụ ọrụ anyị dị ka ndị kwere ekwe jide ụmụnna anyị na Kraịst aza ajụjụ. ma, anyị mkpa ka a na-enyocha onwe anyị nile! Great blog Njem Lee!
harryyeboah • November 12, 2013 na 1:47 pm • zaghachi
Chaị! mụtara ọtụtụ ihe. Chukwu gozie..
EboniRenee • November 12, 2013 na 1:49 pm • zaghachi
Beautifulluy & uche-etinye. Dị anyị mkpa a.
Tony • November 12, 2013 na 2:00 pm • zaghachi
ekele Njem, nke a bụ akụkụ dị mkpa nke Akwụkwọ Nsọ iji ghọta n'ụzọ ziri ezi. Daalụ maka nke a post. I ji ọnụ ekwu ihe m na-eche. Na na na a ntorobịa pastọ, na nke a bụ ihe ive nāchọ ikwu na ndị m na ụmụ akwụkwọ banyere. M ga-enwetaghachi ike iji nke a post na mụbaa on isi ihe ndị a. Ọzọ ekele gị, maka ihe nile unu na-eme ma ga-eme. Biko na Chineke ga-anọgide na-agọzi gị na ezinụlọ gị.
Wesley • November 12, 2013 na 2:04 pm • zaghachi
Awesome. Nnukwu ike gwụrụ m nke ndị mmadụ [Ndị Kraịst bụ ndị na-ebute, na ọtụtụ ndị ọzọ] atụba amaokwu a si dị ka ọ na trumps niile. Ọ na-eji dị ka a ga-esi n'ime ________ free kaadị. Ọ dịghị ma ọlị ihe onye dere ya si. Daalụ maka articulating.
hay • November 12, 2013 na 2:13 pm • zaghachi
Awesome ozizi ebe a. M na-agọzi gị posts. M na-ekele Chineke maka iji gị na ụzọ o si. Ị na-adịghị nnọọ na-akpọ ime music, ma na-ikwuputa okwu Chukwu.
Chineke na-agọzi u na ezinụlọ gị!
Sharon C. James • November 12, 2013 na 2:14 pm • zaghachi
Ekele gị nke ukwuu maka-ekere òkè na nke a echiche. M ga-ekere òkè gị post na-ekpe ekpere na ọtụtụ ndị meworo ka a ha banner, -aghọta ya kpọmkwem dị ka Kraịst pụtara ya, nakwa dị ka Ndị Galeshia 6:1. -anọ gọziri agọzi.
Christoph • November 12, 2013 na 2:17 pm • zaghachi
-Amasị m na-aguputa azụ Jesus ke John 7:24 – “-ekpe ikpe na a ikpe ezi omume.” Na disarms ihe mgbochi bụ na-eduga n'ime ohere ịkọwa ihe ọ pụtara, ka i mere gị post.
Gloglo • November 12, 2013 na 2:18 pm • zaghachi
Nke a bụ ihe m na-ekwu okwu banyere na papa m na o kwuru kpọmkwem otu ihe ahụ. Chineke na-agọzi gị Atụrụ m anya na onye ọ bụla ga na-agụ nke a
MJ • November 12, 2013 na 2:19 pm • zaghachi
okwu ọma. M nụrụ na anyị ekwesịghị ikpe, ma ike n'ezi omume-ekpe ikpe. Dị ka m nwere ike ikwu ihe ụfọdụ banyere a enyi anyị a “shacking elu” ma ahụ dị na ya, M na ọ bụghị na-ihu abụọ n'ihi na m na-adịghị eme ya.
Mark King • November 12, 2013 na 2:26 pm • zaghachi
Daalụ maka elaborating on a Njem. Nke a bụ a dị nnọọ mkpa isiokwu tin ọgbọ a. Nke ukwuu ikike dị adị. Hụrụ n'anya na-emegide ihe a tụrụ gị kwuru, oke.
M na-ahụ uzọ nke ọ bụla ikpe dị ka ndị na nsogbu. Anyị asọmpi ọdịdị ghọọ anyị aghụghọ iche na onye na-akọ anyị na anyị bụ ihe ọjọọ, na e nwere unyi ma ọ bụrụ na ụzọ bụ mgbalị mbuli elu. Ọ bụrụ na anyị na-ahụ nke a dị ka a ịhụnanya ogbugbu, ọ na-ewe on a kpamkpam dị iche iche na-akpa ike.
Otu ihe ka m na-ejide… Ị phrased a otu akụkụ dị ihe n'ụzọ pụrụ emegharị ndị mmadụ. I kwuru, ” Jesus adịghị “pụtara” -ekwu niile ikpe na-ezighị ezi. Ma ọ bụrụ na anyị na-agwa onwe ya eziokwu, anyị adịghị “pụtara” na ma na.
Dị nnọọ ka ihe doo anya n'ihi, ikekwe a ụzọ ka mma isi okwu a bụ na “Anyị ekwesịghị ịkọwa ihe a dị ka Jizọs si” niile ikpe na-ezighị ezi.
A ngwa ngwa na-agụ site na, na mmadụ pụrụ gaa site n'ịgụ a na-eche echiche, “Oh, Jesus apụtaghị na-ekwu na?” Mgbe m nnọọ n'aka na Jizọs bu n'obi ikwu kpọmkwem ihe O kwuru. Ọ bụ Eh na nkọwa.
Amaara m na ihe ị na-ekwu. Dị nnọọ ejide gị ndị kasị elu ma ọ bụrụ na edemede ụkpụrụ. Enwere m ntụkwasị obi na-aghọta mere m kwuru na.
Ekele gị ọrụ (niile ọ bụrụ na ọ, ọ bụghị nanị ndị music)! Na-egweri nwanne!
-enye • November 12, 2013 na 2:35 pm • zaghachi
Deep eziokwu a na-ekwu na nke a.
Chineke na-agọzi gị ozi.
Ana m eche na mgbe anyị na-aghọtachaghị anyị na ala nke mmehie, anyị wee gakwuru ndị agbata obi anyị na ọmịiko na ịhụnanya.
ọ jcruz • November 12, 2013 na 2:42 pm • zaghachi
M hụrụ n'anya nke a!! n'ezie insightly, na-agba ume, aaaand ikpe!!!
egwu ncheta nke ihe ọ pụtara ka ha hụ ibe!! ekele nne-! Chukwu gozie!!
aha: Naanị Chukwu ga-ama m ikpe? (Site Njem Lee nke BuilttoBrag.com blog) | Ron "Big Black" Garrett
WayneChristian • November 12, 2013 na 3:59 pm • zaghachi
Naanị Jizọs kwuru na ọ ka mma! Ịkwada ị bụ a ume ọhụrụ ikuku! Daalụ maka gị ịdị uchu! Ọma e dere dị ka mgbe niile! Chineke Speed ​​nwanne m nwoke!
JosiahCarter • November 12, 2013 na 7:31 pm • zaghachi
Ee! Ekele gị nke ukwuu maka-ede nke a! Nke a na uche m nke ukwuu n'oge na-adịbeghị, karịsịa mgbe m na-ahụ na okwu “ikpe”. M na-maa-ekere òkè na nke a!
David • November 12, 2013 na 8:02 pm • zaghachi
Daalụ. Otu n'ime ndị kasị ezi nkowa nke amaokwu na ihe ọ pụtara na m hụrụ. Kraịst ọ bụla kwesịrị inyocha onwe ha site Gods anya mgbe ekwu okwu ọzọ.
carlosAviles • November 12, 2013 na 8:50 pm • zaghachi
-agba nnọọ ume. Na m na-agbalị na-ada. M enwetaghị onwe m site n'oge ruo n'oge na m maara na m ga-ele anya n'ime mbụ tupu m na-ekwu na-enyere onye na-azụ on a Holy ụzọ.
Ekele Njem Lee.
modallas • November 13, 2013 na 1:53 Abụ • zaghachi
m na-esiri ịkparị. Ugbu a, m nwetara a mma nghọta!!!
modallas • November 13, 2013 na 1:54 Abụ • zaghachi
m na biini-esiri ya. Ekele Chineke m nwetara a mma nghọta
Na • November 13, 2013 na 6:44 Abụ • zaghachi
Ọ bụ ihe anyị mere mmadụ ji ihe anyị kwuru na-eme ka ikpe ụmụnna anyị na-enye aka ma ọ bụ na-emerụ. M na-eche, “Ihe ị na-eme bụ ihe ọjọọ! The Bible na-ekwu, n'ihi ya,. Gị mkpa idozi ya…” Ka ọ bụ, “Nke ahụ bụ agbarapụ akpata mwute na m maara ihe na nke ahụ bụ dị ka. M na-echekwa banyere gị na-achọghị na gị…”
Dị ka Njem kwuru, na ndị ọzọ na ebe anyị na-gwara n'ụzọ doro anya na-ekpe ikpe ndị ozizi ụgha.
O doro anya na anyị kwesịrị Mmụọ Nsọ si nghọta ime ka nri ikpe, otú ahụ ka anyị ga-ejikọta ya na Ya n'iru, n'oge, na mgbe!
Onye ọzọ anyị mgbe Njem mere bụ, ha agaghị anụ ekpere anyị ọbụna ma ọ bụrụ na obi anyị dị na-nri ebe, ma ọ bụrụ na anyị na-adịghị ebi ndụ n'ezie n'iru Chineke na ụmụnna anyị.
Junior • November 13, 2013 na 7:40 Abụ • zaghachi
Ive e-esiri ndị a n'ihi na a mgbe ugbu a. Ma agụ isiokwu a emewo ka m na-eche 10 ugboro dị mma karịa tupu. ekele Njem! Chineke na-agọzi nwa-nne-.
EJD • November 13, 2013 na 8:10 Abụ • zaghachi
magburu onwe ibuotikọ! “Ha mkpụrụ, unu ewe mara ha.” O doro anya Christ whats anyị na-circumspect na akafiakde ese ndị ọzọ – ọtụtụ ihe, anyị na-akpọsa Gospel, akụkụ mbụ na-akọwa otú a onye na-kewapụrụ na a Holy Chineke ruru ka mmehie (nke ahụ bụ a omume ikpe!) Mgbe ahụ anyị na-ekwusa na okwukwe na Jizọs Kraịst (Ya redemptive ọrụ na Cross na Ili ahụ tọgbọ chakoo) bụ azịza nwoke ikewapụ ya n'ebe Chineke, Nna! Ozi nke Oziọma bụ ezughị ezu ma ọ bụrụ na
anyị ahapụ ụmụ mmadụ efu ọnọdụ (Iwu na-ekpe ikpe anyị!) Ma Christ awade amara anyị ndị mmehie. Dị ka John Newton dere, sị, “Mgbe m furu efu, ma ugbu a, m hụrụ!”
Tatenda • November 13, 2013 na 10:57 Abụ • zaghachi
Amen dị egwu. M na-ebi Zimbabwe nakwa na amaokwu bụ ọbụna na-ewu ewu ebe a!!! M na-ekwusa ozi ọma ma na m hụrụ ndị ọzọ ugboro ka m na-elekọta icheta na ndị na-abụghị ndị kwere ekwe na Kraịst ndị na-adịghị ebi ndụ ziri ezi iji amaokwu a dị ka ọta imegide mgbazi. Ọ bụ mwute, n'ezie mwute…
Bruno • November 13, 2013 na 11:48 Abụ • zaghachi
Darnell • November 13, 2013 na 3:18 pm • zaghachi
M n'ụzọ zuru ezu ihe kwekọrọ na nke nkọwa nke na-ekpe ikpe dị ka Matthew 7. M na-chọrọ gbakwunye na site n'ikwu na anyị dị ka ndị Kraịst ghara “ikpe” ụwa ma ọ bụ ndị na-adịghị na Christ, ma anyị “ikpe” n'ahụ Kraịst ma ọ bụ na chọọchị. Chineke na-ekwu na ya onwe ya “ikpe” ụwa na-adịghị anyị umu-ya. 1 Ndị Kọrịnt 5:12-13
aha: Isiokwu si Njem Lee ekpe ikpe onwe gị na ndị ọzọ « 360na-eto eto
Stephen • November 13, 2013 na 5:27 pm • zaghachi
Kate • November 13, 2013 na 7:06 pm • zaghachi
Hey ~ m na-ekwusa ozi ọma nke a Sunday ekpe ikpe (ma ọ bụ na akpa ọchị) na m na-eche na ọ bụrụ na m nwere ike iṅomi / Tapawa ụfọdụ n'ime echiche gị n'ime m ozizi? ekele! Kate
Clayton • November 13, 2013 na 10:01 pm • zaghachi
dị nnọọ ukwuu, Chineke na-agọzi dị egwu
aha: Morning Mashup 11/14 | Theology Ihe
aha: Weekly Roundup [11/15/13] | Harvard Avenue College / Career Ministry
meriri • November 18, 2013 na 1:38 pm • zaghachi
M ekele maka ịhụnanya nke Chineke na gọziri agọzi okwu amamihe si n'aka Chineke site gị ụmụ okorobịa… ịhụnanya dị ukwuu
aha: IHE Onye Kraịst na-ele anya dị? | Ịchọ Mkpụrụ Obi na Seoul
Tyler • November 26, 2013 na 1:07 pm • zaghachi
Meela nnọọ maka ikenye a. Echere m na nke a na ozi bụ na otú dị mkpa maka Ndị Kraịst nọ n'ọnọdụ nile ná ndụ na-anụ. Anyị mkpa ịmalite n'anya onye ọ bụla ọzọ ụzọ Jizọs kpọrọ anyị ka anyị nke pụtara na-agwa okwu ebe dị mkpa ka a gwara okwu na ọmịiko.
pelumi • November 26, 2013 na 5:56 pm • zaghachi
a nyeere m aka n'eziokwu
dị ka mgbe niile
-agọzi gị njem
Kathryn • November 27, 2013 na 8:51 pm • zaghachi
Biko ekpe ekpere ka m ga-emeghe obi eziokwu; na m ga-ama na ọ na-enwere onwe ha; na m ga-enwe okwukwe na Jizọs ma na nchegharị nke mmehie m. Na m ga-enweta ya amara. Na agaghị m iwere iwe m mkpa ma site mmehie. Daalụ.
naa • December 4, 2013 na 11:09 Abụ • zaghachi
bụ n'ebe ahụ ịkọrọ a okwu….ya reaaly anya oghere ihe ị dị nnọọ kwuru na ndị a blog Njem…Ịnọgide na-ekwusa ozi ọma (ha niile)..
aha: njem Lee – Naanị Chukwu ga-ama m ikpe? » Christian Apologetics & ọgụgụ isi Ministry
aha: njem Lee - Naanị Chukwu ga-ama m ikpe? | Ejere Grace ApologeticsServants nke Grace Apologetics
Michael • January 29, 2014 na 12:47 pm • zaghachi
Ọ bụrụ n'ezie na-eche banyere ya, “Amana m ikpe.”, bụ n'ezie ịkatọ.
Ọ bụrụ na onye na-agbalị na-enyere gị, na ị na ebubo ha nke ikpe ikpe gị……nyochawa, ị na-ekpe ikpe ha. (Na eboro ya ebubo ha na na)
-eme ihe n'eziokwu, i nwere ike ekpe m ikpe ma ọ bụrụ na ị chọrọ, M nwere ike mkpa mgbazi. (“Correct na ịhụnanya”) Dị nnọọ adịghị ekpe m ikpe n'ihi na m n'oge gara aga ma ọ bụ ihe ọ bụla ma Okwu.
ebere • February 19, 2014 na 10:29 Abụ • zaghachi
Chaị. Nke a bụ oké post. n'oge na-adịbeghị, M na a na-anwa echetara onwe m nke Matthew 7 ma ụdị chefuru ihe ọ pụtara. Na anyị na-chọrọ inyere onye ọ bụla ọzọ si ma ọ bụghị obi ọjọọ banyere ya. Ekwetara m. Ọ bụ ọ dị ka mwute na-ahụkwa ụzọ ppl iji iwe na-akatọ ndị ọzọ ppl na ọ na-ahụ katọrọ obi na-adị agbajikwa. The akatọ doro anya na ọ bụghị zuru okè ma o yiri ka ha adịghị ọbụna aghọta na ọ. Ọ bụ akpasu iwe. More ndị mmadụ mkpa na-eme ihe Matthew 7. Na ndị ikpeazụ amaokwu dị ukwuu na-. Ndị mmadụ na-agaghị na-achọ ije ije uzo ebe onye ọ bụla na sidelines na-agbụpụ ọsọ na ha.
Simon • March 12, 2014 na 1:07 pm • zaghachi
Chaị, emenye okwu. M ga-agụ ihe si gị posts! ;)
April • March 23, 2014 na 11:14 Abụ • zaghachi
Chaị!!! Obi ụtọ a emesịala kwuru na a!!! M dị ka onye oz o na m ọrụ banyere nke a di na nwunye nke ụbọchị ago!!!! ebube blog!!
Kyle • Ka 8, 2015 na 9:10 Abụ • zaghachi
ya mere ebe a bụ ajụjụ maka gị. n'ihi na n'oge gara aga afọ ole na ole i na-arụ ọrụ na-adịghị jugding onye ọ bụla n'ihi ihe ọ bụla. dị ka a riri ahụ mara mma nke ukwuu onye ọ bụla n'ụwa jugdes ị na nke a pụtara na n'ụzọ ụfọdụ a ndị mmadụ ugbu a matara ihe niile banyere gị. ọbụna ihe echiche gị ma ọ bụ ihe unu agbarapụ-eme ma ọ bụ ọbụna otú ị ga-eme ihe ma ọ bụ na ha nwere ike ịgwa gị ihe ndị dị gị banyere ihe. i n'ezie Na-esi otú ndị mmadụ nwere ike ime nke a. ya n'ezie ọjọọ. ka m bịara chọpụta na e nwere ọtụtụ ndị si n'ebe ndị kpọrọ m asị, na ha agaghị ọbụna zutere m. theres nweghị ụzọ ịchịkwa ihe Pop n'ime anyị isi. iche echiche tupu jugdment nwere ike iji kwadebe onwe gị onwe maka ihe ị na-eche nwere ike occure akpata ihe ị na-achọpụta banyere onye. ma ọ bụrụ na ị dị nnọọ ịkwụ ụgwọ ihe ọma anya ma nwere ike bulie na ụmụ obere ihe ndị na-egosi eziokwu banyere onye bụ nke ka jugding? na mgbe ahụ na theres ajụjụ banyere ọtụtụ ndị chere. nke kasị nnọọ njọ ụzọ jugde a. i Na-enweta ya. ọ bụ ezie na ị dị nnọọ gwara onye a na i Na ịtụkwasị ha obi na-ebu ụfọdụ ọrụ n'ihi (-emekarị ọ dịghị ihe mere) NDỊ ỌZỌ ọzọkwa WTF otú i chere na ihe ahụ ka m maara na ị ga-eme. N'ezie ma à na a mara ida, akụkọ ihe mere eme nwere ike na a ga-ekpeghachi, ma ịkọrọ onye ihe ndị ha chere, -eche, ma ọ bụ otú e-aga na-eme bụ bullshit. ya ihu ọma ìsì jugdment. ma ma onye ahụ ga-eche ugbu a encompetant na wont ọbụna na-agbalị, ma ọ bụ onye na-amasị m, ga guentee iji gosi na onye mere ihe ọjọọ na dịghị mgbe ha ga-asị na ọzọ. ma ọ bụ ezie na ị gosi na onwe gị oge na oge ọzọ. otu echiche. echiche? i nwere ike ịga n'ihu ụbọchị nile.
aha: njem Lee - Naanị Chukwu ga-ama m ikpe? - SOG- Ejere Grace
aha: Naanị Chukwu ga-ama m ikpe… | Ịmụmụ ọnụ ọchị bụ okwukwe